SHINee ၁၀နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲမှာ Jonghyun ကိုအတူရှိနေစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ Key – Trend.com.mm
SHINee ၁၀နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲမှာ Jonghyun ကိုအတူရှိနေစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ Key
Posted on May 25, 2018 by Noel
နာမည်ကျော်ကေပေါ့ပ်အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SHINee ဟာ မေလ ၂၄ရက်နေ့က အနုပညာသက်တမ်း ၁၀နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။Onew ၊ Key ၊ Minho ၊Taemin ၊Jonghyun ဆိုပြီးယောက်ျားလေးအဖွဲ့ဝင် ၅ယောက်နဲ့ဖွဲ့ထားပေမဲ့ အဖွဲ့ဝင် Jonghyun ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့
၂၀၁၇၊ဒီဇင်ဘာလက သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် အဖွဲ့ဝင် ၄ယောက်ပဲကျန်နေပါတော့တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုပေမဲ့ ညီအစ်ကိုတွေလိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ Jonghyun ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ သူတို့အတွက်အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Jonghyun ဟာ ၂၀၁၇ ၊ဒီဇင်ဘာလလောက်တုန်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေများစွာခံစားခဲ့ရတာကြောင့် သူ့ရဲ့ဘ၀ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သေဆုံးမှုက မိသားစုဝင်တွေ၊အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုသာမက ပရိသတ်တွေကိုပါဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေပေးခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး ဈာပနအခမ်း အနားကိုလည်း ပရိသတ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာက လိုက်ပို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
SHINee ရဲ့ ကျန်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင် ၄ယောက်ဟာလည်း အခုချိန်ထိတိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုလို ချစ်ရတဲ့ Jonghyun ကိုသတိရတမ်းတနေဆဲပါ။မေလ ၂၄ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့ ဂီတအဖွဲ့လေး ၁၀နှစ်ပြည့်ခဲ့တာမို့လို့ ပိုပြီးသတိရနေခဲ့ကြပါတယ်။၁၀နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် သူတို့ရဲ့  SM Entertainment ခေါင်းဆောင် Lee Soo Man နဲ့အတူ ပါတီပွဲလေးကျင်းပခဲ့ကြတယ် လုိ့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကို Key ကသူ့ရဲ့ တွစ်စ်တာမှာတင်ခဲ့ပြီး hashtags လေးနဲ့ #၁၀နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ #shinee #smt #မင်းဒီမှာရှိနေဖို့မျှော်လင့်မိတယ် ဆိုပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးစာလေးက Jonghyunကိုအနားမှာရှိစေချင်တဲ့သဘောပါ 🙁 Key နဲ့ Jonghyun ဟာ ပိုပြီးအတွဲများခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းညီအစ်ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
SHINee အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ညီလို အစ်ကိုလိုချစ်ရတဲ့ Jonghyun ကိုသတိရနေသလို Jonghyun နဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်မပျက်ရအောင် ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကြိုးစားပြီးလုပ်နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ Reality Show (SHINee’s Back) နဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လာမယ် လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရှိုးမှာ အပိုင်း ၆ပိုင်းပါဝင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေက ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူမျှဝေ ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အကြိုရိုက်ကူးမှုကိုတော့ ဇွန်လ ၆ရက်နေ့မှာ Digital Channel M2 ကနေထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေ၊အစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ SHINee အဖွဲ့ပြန်လာပါပြီ !
နာမညျကြျောကပေေါ့ပျအဆိုတျောအဖှဲ့ဖွဈတဲ့ SHINee ဟာ မလေ ၂၄ရကျနကေ့ အနုပညာသကျတမျး ၁ဝနှဈပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။Onew ၊ Key ၊ Minho ၊Taemin ၊Jonghyun ဆိုပွီးယောကျြားလေးအဖှဲ့ဝငျ ၅ယောကျနဲ့ဖှဲ့ထားပမေဲ့ အဖှဲ့ဝငျ Jonghyun ဟာ လှနျခဲ့တဲ့၂၀၁၇၊ဒီဇငျဘာလက သဆေုံးသှားခဲ့ပွီဖွဈလို့ အခုဆိုရငျ အဖှဲ့ဝငျ ၄ယောကျပဲကနျြနပေါတော့တယျ။ အဖှဲ့ဝငျတှဆေိုပမေဲ့ ညီအဈကိုတှလေိုခဈြခငျကွတဲ့သူတှဖွေဈလို့ Jonghyun ရဲ့ သဆေုံးမှုဟာ သူတို့အတှကျအစားထိုးမရနိုငျတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကွီးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Jonghyun ဟာ ၂၀၁၇ ၊ဒီဇငျဘာလလောကျတုနျးက စိတျဖိစီးမှုတှမြေားစှာခံစားခဲ့ရတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူကိုယျတိုငျပဲအဆုံးသတျခဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့သဆေုံးမှုက မိသားစုဝငျတှေ၊အဖှဲ့ဝငျတှေ ကိုသာမက ပရိသတျတှကေိုပါဝမျးနညျးကွကှေဲမှုတှပေေးခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့နောကျဆုံး စြာပနအခမျး အနားကိုလညျး ပရိသတျတှထေောငျပေါငျးမြားစှာက လိုကျပို့နှုတျဆကျခဲ့ကွပါတယျ။
SHINee ရဲ့ ကနျြနတေဲ့အဖှဲ့ဝငျ ၄ယောကျဟာလညျး အခုခြိနျထိတိုငျအောငျ သူတို့ရဲ့ ညီအဈကိုလို ခဈြရတဲ့ Jonghyun ကိုသတိရတမျးတနဆေဲပါ။မလေ ၂၄ရကျနကေ့ သူတို့ရဲ့ ဂီတအဖှဲ့လေး ၁ဝနှဈပွညျ့ခဲ့တာမို့လို့ ပိုပွီးသတိရနခေဲ့ကွပါတယျ။၁ဝနှဈပွညျ့အမှတျတရအဖွဈ သူတို့ရဲ့SM Entertainment ခေါငျးဆောငျ Lee Soo Man နဲ့အတူ ပါတီပှဲလေးကငျြးပခဲ့ကွတယျ လို့သိရပါတယျ။အဲ့ဒီဓာတျပုံလေးကို Key ကသူ့ရဲ့ တှဈဈတာမှာတငျခဲ့ပွီး hashtags လေးနဲ့ #၁ဝနှဈပွညျ့အမှတျတရ #shinee #smt #မငျးဒီမှာရှိနဖေို့မြှျောလငျ့မိတယျ ဆိုပွီး တငျခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးစာလေးက Jonghyunကိုအနားမှာရှိစခေငျြတဲ့သဘောပါ 🙁 Key နဲ့ Jonghyun ဟာ ပိုပွီးအတှဲမြားခဲ့တဲ့သူငယျခငျြးညီအဈကိုလညျးဖွဈပါတယျ။
SHINee အဖှဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ညီလို အဈကိုလိုခဈြရတဲ့ Jonghyun ကိုသတိရနသေလို Jonghyun နဲ့ပရိသတျတှစေိတျမပကျြရအောငျ ဂီတလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျးကွိုးစားပွီးလုပျနပေါတယျ။ မကွာခငျမှာတော့ Reality Show (SHINee’s Back) နဲ့ ပရိသတျရှပွေ့နျလာမယျ လို့သိရပါတယျ။အဲ့ဒီရှိုးမှာ အပိုငျး ၆ပိုငျးပါဝငျပွီးအဖှဲ့ဝငျတှကေ ပရိသတျတှနေဲ့အတူတူမြှဝေ ရိုကျကူးသှားမှာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီအစီအစဉျအကွိုရိုကျကူးမှုကိုတော့ ဇှနျလ ၆ရကျနမှေ့ာ Digital Channel M2 ကနထေုတျလှငျ့ပွသသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ပရိသတျတှအေတှကျ သီခငျြးကောငျးလေးတှေ၊အစီအစဉျကောငျးလေးတှနေဲ့ SHINee အဖှဲ့ပွနျလာပါပွီ !
အရိပ်ကိုအသုံးပြုပြီး သူ့ရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကို ဒီလိုဖန်တီးခဲ့
Air-con ခန်းထဲမှာအမြဲတစေနေတတ်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်